Kaarotii, Killeefi Firii Bunaa – OLI
Kaarotii, Killeefi Firii Bunaa
Shamarreen umriin ishee walakkeessa digdamootaa taate takka harmee ishee bira dhaqxee jireenyi hammam akka itti ulfaachaa jiruufi bu’aa ba’iin hedduun akka ishee mudataa jiru itti himte. Wal’aansoo jireenyaa akka dadhabdeefi guyyaa guyyaadhaan rakkoodhumaaf gufuu garagaraa waliin rakkachaa ooluu akka hifatte ibsiteef. Yeroo rakkoon tokko furamu, rakkoo isa kan biraattu natti dabras jettee itti himte.
Yeroo kana harmeen ishees osoo deebii tokko hin kenniniif shamarree tana gara mana nyaata itti bilcheessanii fuutee deemten. Ergasii, ibidda qabsiistee Okkotee bishaaniin guuttee ibiddarra keette. Yeroo muraasa booda bishaanichi ni danfe.
Itti aansudhaan bishaan danfe sanatti Jalqabarratti kaarotii, itti aansitee Killee itti aansitee Firii buna itti naqxe. Ergasii achuma dhaabatanii mucayyoo ishee sanaan waliin daqiiqaa 20f waan garagaraa haasa’aa waan ta’u eegan. Erga sadeenuu sirriitti bilchaachuu isaanii addaan baafattee booda tokko tokkoon baastee meeshaa irra keette.
Ergasii, mucayyoo isheetiin;
Ilmookoo, mee maal argite? maal hubatte jettee gaafatte
” Kaarotii, Killeefi Firii Bunaa” tin arge harmeetoo jettee deebisteef. Ergasii mee harka keetiin Kaarotii kana tuqi jetteen, mucayyoonis harkaan erga tuqxee booda, ni lallaaffata harmeetoo jetteen.
Itti aansudhaan mee killee kana ilaali jetteen. Mucayyoon yoo killee bilchaate sana ilaaltu itti jajjabaate. Killeen dur keessi bishaanii suni amma keessi dhagaa ta’e.
Dhumarratti firii bunaa sana akka tuttuqxee ilaaltu gaafatte. Mucayyoonis firii bunaa sana oliif gadi gootee yoo ilaaltu waan haarawa arguu dadhabde. Ergasii mee bishaanichatti siqiitoo fuunfadhu jetten. Isheenis bishaanichatti siqxee fuunfatte, yeroo kana dhandhama bunaa mi’aawaa ta’e akka fuunfatte harmee isheetti himte.
Hamma ammaatti wanti adeemaa jiru suni mucayyodhaaf sila hin galiniif, harmee ofiitiin ~ harmeetoo kana jechuun maal jechuudha? Jettee gaafatte!
Harmeen Isheetis, Ilaali tiruu too, sadeen isaanituu rakkoodhuma walfakkaatu dabarsan, bishaan walfakkaataa keessatti waddaman, wanti isaan haala addaatiin miidhe tokko hin jiru. Haa ta’u malee sadeen isaanituu haala garagaraatiin ibidda sanaaf deebii laatan…!
Akkuma argite sana Kaarotiin osoo bishaan danfaatti hin naqamin dura jajjabaafii olqajeelaa ture. Erga bishaan danfaatti naqamee booda garuu ni laaffate, humna dhabe. Akkuma beektu Killeen keessi ishee bishaan dhangala’aa ture. Erga bishaan keessatti danfee booda garuu ni jajjabaate, ni cime.
Firiin bunaa suni immoo akka dura jirurraa hedduus hin jijjiiramne. Bishaan keessatti waadamnaan garuu ofiif gubatee baduu osoo hin ta’in bishaanichuma sana foolii isaa gara miidhagaafi hawwataa ta’etti jijjiire jettee waan uumame hunda bifa ilmoo isheetiif galuufii danda’uun ibsiteef…!
Mee ilmoo too ati kanneen keessaa isa kami? Jettee gaafatte
Gaafa rakkoon balbala kee dhadhooftu akkamiin ofirraa deebista? Akka Kaarotii laamshota moo? Akka killee taatamoo? Akka firii bunaa sana rakkoo sana akka carraatti fudhattee jijjirama biraa mul’ista? jettee gaafatte.
Mucayyoonis harmeetoo, ani amma kana hin jedhu garuu mee atumti kan ta’uu qabu natti himi jetteen. Harmeen isheetis, ilmoo too rakkoodhaaf jilbiffachuun, harka kennuun, laamshawuun tasumayyuu hin barbaachisu jetteen. Hamma danda’ameen rakkoo si mudatu hundaa akka carraatti fudhadhuu jijjiirama hin eegamne fiduuf yaali jettee gorsa laattef…!
Eeyyen Jalleewwankoo, as biratti filannoon kan keenya. Yoo rakkoo nu mudatuuf jilbiiffannee, harka kennine akkuma kaarotii sana osoo jalqaba hammuma fedhes jabaa taanee boodarra laaffannee, laamshofnee hafna. Yoo rakkoo nu mudatu sana ciminaan hamilee guutuu waliin onnanne akkuma Killeen dura keessi bishaanii suni erga ibiddaan waadamtee jajjabaatte sana nutis inumayyuu rakkinni suni nu cimsaa, nu jabeessaa dhufa. Kana biras dabarree yoo baay’ee cimne immoo inumayyuu rakkoo sana akka carraa guddaatti fudhannee ofis, namoota naannoo keenya jiraniifis carraa guddaa biraa ittiin uummannee jijjiirama ajaa’ibaa duraan hin jirre fiduu dandeenya. Waan hundaafuu, filannoon kan keeti, kan kooti, kan keenya!